Hogamiye Farmaajo oo ka hadlay guusha Soomaaliya ay kaga…
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa soo dhaweeyay kursiga Guddoomiye ku xigeenka golaha guud ee Qaramada Midoobay oo ay Soomaaliya ku guuleysatay.
Muddo sanad ah waxaa kursigaan ku fadhinaya Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cismaan (Abuukar Baalle) oo dadaal dheer ugu jiray qabashadiisa waayahaan waday.
Waxa uu guddoomiye ku xigeen uu la shaqeyn doono u noqonayaa Volkan Bozkır oo u dhashay dalka Turkiga ahna Danjiraha dalkaas u qaabilsan Qaramada Midoobay oo isna xilkaas ku guuleystay.
Hogamiye Farmaajo iyo Wasiirka Arrimaha dibadda XFS Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa xiriir dhanka Internet-ka ah la sameeyay Guddoomiye ku xigeenka cusub ee 75-aad Golaha guud QM ahna Danjiraha Soomaaliya ee UN-ka.
Madaxweynaha ayaa Abuukar ku bogaadiyay tartanka uu galay iyo guusha uu ka gaaray, isaga oo tilmaamay in ay horudhac u tahay u loolanka Kursiga aan joogta ahayn ee Golaha ammaanka 2023/2024-ka, sidoo kalena muujinayo dib usoo laabashada Soomaaliya.
“Soomaaliya waxa ay si buuxda ugu soo laabatay fagaareyaasha caalimiga ah, iyadoo ay inaga muuqato firfircooni, hal abuur hoggaamineed, dhexdhexaadnimo, ilaalinta xasilloonida Gobolka iyo ka shaqeynta danaha wadajirka ah ee dhinacyada horumarinta, iskaashiga iyo wax-wada qabsiga” ayuu yiri Hogamiye Farmaajo.
Dhanka kale, Abuukar Daahir Cismaan waxa uu sheegay in kursigaan Soomaaliya ay kaga dhigan tahay in markii afaraad taariikhda tan iyo markii ay ku biirtay Qaramada Midoobay ay tahay, isla markaana 33-sano laga joogo markii ay ku fadhiisatay.
Mudada xil-heynta Danjire Abuukar Baalle oo kamid noqonaya shir-gudoonka fadhiga 75aad ee golaha ayaa hal sano, 2020-21. Safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ayaa u hambeeyay doorashada.